C/raxmaan Cirro oo ka digay Qatarta iyo Musiibada ka dhalan karta Saldhiga Imaraadka ee Berbera – XAMAR POST
C/raxmaan Cirro oo ka digay Qatarta iyo Musiibada ka dhalan karta Saldhiga Imaraadka ee Berbera
By Mohamed Ahmed On May 5, 2018
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Waddani C/raxmaan Maxamed C/llaahi (Cirro) oo goob fagaare kula hadlayay dadka reer Berbera ayaa ka digay cawaaqibka ka dhalan kara Saldhigga Imaaraadka Carabta ka dhisanayo Berbera.
C/raxmaan Cirro ayaa sheegay in aanu ka soo horjeedin in la maalgasho Berbera, balse uu diidan yahay in la xaraasho, isagoo xusay in heshiiskii Dekeda Berbera aan illaa iyo hadda waxba laga dheefin, isla markaana ay dhowaan soo baxday in cid kale oo aan aheyn Somaliland ay saxiixday.
Waxaa uu sheegay in saldhigyada milateri ee adduunka si qaldan loo isticmaalo, isagoo hadal qaaday saldhigga Milateri ee Imaaraadka carabta ka dhisanayo Berbera inuu la mid noqon karo saldhigyada adduunka ee xabsiyada leh, sida Saldhigga Cuba ee Guantanamo Bay, kan Afghanistan iyo mid ku yaalla Yemen.
“Berbera waxay noqon doonaan jeel ka mid ah jeelashada dunida ee dadka lagu ciqaabo”ayuu yiri Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Waddani C/raxmaan Cirro.
Mr Cirro ayaa sheegay in xilligii dagaalkii qaboobaa ay Berbera xilli saldhig milateri u aheyd Ruushka iyo Mareykanka, isla markaana hadii la bixinayana ay aheyd in iyaga la siiyo.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Waddani C/raxmaan Cirro ayaa kormeer ku maraya Gobolo ka tirsan Somaliland, isagoo xoojiyay ololihiisa ka dhanka ah Xukuumadda Kulmiye oo uu dhowaan ku eedeeyay inay gashay khiyaano qaran.
SAWIRRO:Mareykanka oo ballaariyay Saldhiga ciidan uu ku leeyahay Balli-doogle
Golaha Aqalka sare oo ka deyriyay amniga xaruntooda iyo AMISOM oo ay Dalbadeen